Tsy mora ny fikarohana sy ny haino aman-jery sosialy
Alarobia, Jona 9, 2010 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Mora ny media sosialy. Mora ny fanatsarana ny motera fikarohana. Mora ny mitoraka bilaogy.
Aza miteny intsony. Tsy marina izany. Mampatahotra ny teknolojia. Miady amin'ny fampiasana teknolojia sy fantsona vaovao ireo orinasa mahazatra mba hahazoana vokatra tsara. Betsaka ny mandao na misoroka azy tanteraka. Mampatahotra ny Internet, ny fikarohana ary ny media sosialy.
Tsotra ny Twitter, sa tsy izany? Tena sarotra ve ny manoratra tarehintsoratra 140? Tsy… raha tsy hoe voafatotra any am-piasana ianao miaraka amina andraikitra maro hafa, eo ambany fanerena hanome valiny mandritra ity fitotonganana ity, ary te-handefa bitsika tsara miaraka amin'ny fanaraha-maso mahasalama hamerenana ny fifamoivoizana hiverina amin'ny tranokalanao hanova mpanjifa. Ary ataovy izany rehetra izany nefa tsy manilika ireto manaraka ireto ary manimba ny marikao.
Mora ny fanatsarana, sa tsy izany? Mitadiava teny lakile fotsiny ary avereno im-taonina maro izy ireo. Azo antoka… raha tsy mifaninana amin'ny teny lakile ianao - avy eo SEO dia sarotra kokoa.
Tsotra ny karama isaky ny kitiho. Mametraha teti-bola ary tsindrio ny diany. Ary arotsaho maina ny teti-bolanao avy eo nefa tsy mahazo fanovana. Ny fanatsarana ny isa amin'ny kalitaon'ny doka, ny fametrahana antso ho amin'ny hetsika, ny kendrenao amin'ny atiny, ny fandaharam-potoananao amin'ny doka, ny fametrahana paikady teny ratsy ary ny fanatsarana ny pejinao dia tsy dia mora loatra.
Ampahany mofomamy ny fanaovana bilaogy. Mametraha WordPress amin'ny kaonty fampiantranoana $ 6 ary manorata atiny isan'andro. Manatsara ny lohahevitrao. Manatsara ny paositra tsirairay. Mandrosoa ny bilaogy. Syndicate ny atiny. Manorata isan'andro ny vokatra, serivisy ary mpanjifa mitovy. Ataovy manan-karena isan'andro ny atiny ho an'ny karoka, manery ny mpitsidika ary manintona ny varotra ho varotra. Mora ny andro 1. Andro 180… tsy dia mora loatra.
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay izao izay nandany an'arivony dolara tamin'ny media nentim-paharazana, miaraka amin'ny valiny tena ratsy, nefa tsy nanambola mihitsy tamin'ny paikady an-tserasera noho ny antony roa. Voalohany, tsy nanana ny fahaizana anatiny hamaritana sy hanatanterahana paikady fandresena izy ireo. Faharoa, tsy nisalasala nanakarama mpanolotsaina izy ireo satria ny tsirairay dia nanamboatra azy ho mora. Nanao ezaka antsasaky ny hady izy ireo ary tsy nahazo valiny… ka niverina tany amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana izy ireo.
Mahagaga ny fotoana azon'izy ireo, saingy diso fanantenana izy ireo tamin'ny famakiana lahatsoratra taorian'ny lahatsoratra momba ny zavatra tsotra. Tsy mora izany ry havana! Amin'ity mpanjifa manokana ity dia mety hiasa amin'ny orinasa tsy mitovy latsaky ny 5 aho… orinasam-pitantanana fandoavam-bola, orinasam-pikarohana motera fikarohana, tetikady tetikady, orinasa mpamorona marika sy sary, ary mampiasa ny paikadiko manokana hikarohako sy haino aman-jery sosialy miaraka amin'izy ireo. Paikady mafonja izay ananantsika fotoana kely hanamboarana, hanatanterahana ary hanombohana handrefesana ny valiny. Raha tsy afaka mahazo ny vidiny isaky ny akaiky izahay ao anatin'ny 6 ka hatramin'ny 9 volana dia ho very ny mpanjifa.
Tsy mora izany.
Tags: amazon s3valin'ny orinasahiresakatapakaFatra CPmyreponofaharetan'ny fitsidihana